I-Waydroid, iseti yezixhobo zokusebenza zakho ze-Android kwi-Ubuntu | Ubunlog
I-Waydroid, iseti yezixhobo zokusebenza zakho ze-Android kwi-Ubuntu
Ubumnyama | 25/09/2021 01:42 | software
Ngokuqinisekileyo uEnye yeempawu eziceliwe kakhulu ngabasebenzisi beLinux Amandla okwenza usetyenziso lwe-Android kusasazo lwayo Into endiyithandayo kukuba nangona kukho inani elikhulu leendlela zokufezekisa oku, uninzi lwazo lusekwe ekudalweni nasekusebenziseni umatshini obonakalayo ngenkqubo, engasebenzi kakhulu xa ufuna ulwalathiso phakathi kwe-Android kunye ulwabiwo lwakho.
Yiyo loo nto namhlanje siza kuthetha ngeprojekthi yeWaydroid olungiselele iseti yezixhobo ezithi ikuvumela ukuba wenze imeko eyodwa Kusasazo oluqhelekileyo lweLinux pUkulayisha umfanekiso opheleleyo wenkqubo yeqonga le-Android kwaye uququzelele ukuqaliswa kwezicelo ze-Android nayo.
1 Malunga neWaydroid
2 Uyifaka njani i-Waydroid kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Le projekthi ngaphambili yayibizwa ngokuba yi-Anbox-Halium, uguqulelo olwakhiwe ngokutsha lwe-Anbox eyilelwe ukusebenzisa iihardware zakwasekhaya kwizixhobo zokubamba kune-Anbox, oko kuthetha ukusebenza ngokukhawuleza. Eyona njongo iphambili yale projekthi kukusebenzisa usetyenziso lwe-Android kwiifowuni ezisekwe kwi-Halium zeLinum (i-Halium iyafana nomxholo kwi-Android GSI, kodwa kwiLinux esemgangathweni), kodwa inokuqhutywa nakwesiphi na isixhobo esine-Linux kernel.
Imeko-bume yakhiwe kusetyenziswa ubuchwephesha obuqhelekileyo ukwenza izikhongozeli ezizimeleyos, ezinje ngezithuba zamagama zenkqubo, ii-ID zomsebenzisi, inkqubo esezantsi yenethiwekhi, kunye neendawo zokunyuka. Isixhobo se-LXC sisetyenziselwa ukulawula isikhongozeli kunye nokuqhuba i-Android kwikernel yesiqhelo ye-Linux, iimodyuli ze-binder_linux kunye ne-ashmem_linux zilayishiwe.
Imeko-bume yenzelwe ukusebenza ngeseshoni esekwe kwinkqubo yeWayland. Ngokungafaniyo nokusingqongileyo kwe-Anbox, iqonga le-Android libonelela ngokufikelela ngokuthe ngqo kwihardware, ngaphandle kwemaleko eyongezelelweyo. Ngelixa inkqubo yenkqubo ye-Android ebonelelwe ngofakelo isekwe kwiprojekthi yeLineageOS eyakhayo kunye ne-Android 10.
Kwiimpawu ezibalaseleyo Ukusuka kwiWaydroid, oku kulandelayo kuchaziwe:
Umdibaniso wedesktop: Ukusetyenziswa kwe-Android kunokusebenza ngokuhambelana nokusetyenziswa kwendalo kweLinux.
Ukuxhasa ukubeka iindlela ezimfutshane kwizicelo ze-Android kwimenyu esemgangathweni kunye neenkqubo zokubonisa kwimowudi yokujonga ngokubanzi.
Ixhasa ukuqhuba usetyenziso lwe-Android kwimowudi yeewindows ezininzi kunye nesitayile windows Ukutshatisa ubeko olusisiseko lwe desktop.
Kwimidlalo ye-Android, ukukwazi ukuqhuba usetyenziso kwimowudi yescreen esigcweleyo kubonelelwe.
Kukho imowudi ekhoyo ukubonisa ujongano oluqhelekileyo lwe-Android.
Ukongeza, kuyakhankanywa ukuba ukufaka iinkqubo ze-Android kwimowudi yemizobo, ungasebenzisa usetyenziso lwe-F-Droid okanye ujongano lomgca wokuyalela "usetyenziso lweappdroid faka".
UGoogle Play akaxhaswanga ngenxa yokudibanisa iinkonzo zobumnini zikaGoogle, kodwa ukumiliselwa kwasimahla kweenkonzo zikaGoogle kunokufakwa kwiprojekthi ye-MicroG.
Ikhowudi yezixhobo ecetywayo yile projekthi ibhaliwe kwiPython kwaye ikhutshwa phantsi kwelayisensi yeGPLv3. Iiphakheji ezilungiselelwe zenzelwe Ubuntu 20.04 / 21.04, Debian 11, Droidian, kunye neUbports.
Uyifaka njani i-Waydroid kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Into yokuqala ekufuneka siyenzile ukuze sikwazi ukufaka i-Waydroid kwinkqubo yethu kukuvula i-terminal (sinokuyenza ngesinqumli sekhibhodi Ctrl + Alt + T) kwaye kuyo siza kuchwetheza oku kulandelayo:
Into yokuqala kukuchaza ukuhanjiswa kwethu, apho siza kuthatha indawo "yenguqulo-ubuntu" ngegama lekhowudi yenguqulo esikuyo, enokuthi igxile, ibionic, hirsute, njl.
Ngoku siqhubeka nokufumana izitshixo ze-gpg kwaye sizingenisa nge:
Nje ukuba kwenziwe, ngoku siyaqhubeka ukufaka i-Waydroid kulwabiwo lwethu ngokuchwetheza:
Kwaye ekugqibeleni siqhubeka nokwenza iinkonzo ze-Waydroid, eziyinkqubo ye-init:
Kwaye siqhubeka nokuqhuba i-Waydroid nge:
Kwimeko yeengxaki, sinokuqalisa ngokutsha isikhongozeli nge:
Okokugqibela, kwabo banomdla wokukwazi okungakumbi malunga neWayDroid, banokujonga iinkcukacha kwiwebhusayithi esemthethweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » I-Waydroid, iseti yezixhobo zokusebenza zakho ze-Android kwi-Ubuntu
Ngokwamagqabaza kwiphepha kufuneka ungene ngemvume kwaye uqalise iWayland
Umzekelo, ayizukundivumela ndiyifake ku-Ubuntu
IFirefox sele inenkqubo entsha yokucebisa kunye nembonakalo entsha kwiFocus